भारतमा देखिएको सलह नेपाल भित्रिएला ?
पाकिस्तानबाट भारत भित्रिने सहल नेपाल पनि आउने सम्भावना छ । तर यसका लागि कुनै सावधानी अपनाइएको छैन ।
काठमाडौँ — गत बिहीबार भारतको ‘इन्डिया टीभी’ र ‘अग्निवाण’ पत्रिकाको अनलाइन संस्करणले राजस्थानको रेगिस्तान क्षेत्रमा सलहको झुन्ड देखिएको समाचार प्रकाशन गरे । समाचारमा सलहले पुर्‍याउन सक्ने क्षतिलाई दृष्टिगत गरी जिल्लामा सावधानी अपनाउन भनिएको उल्लेख छ ।
गत शनिबार भारतकै ‘हिन्दुस्तान’ पत्रिकाको अनलाइन संस्करणमा पनि उत्तर प्रदेशमा सलहको झुन्ड देखिएको समाचार छापियो । उसले पनि पाकिस्तानबाट राजस्थान हुँदै सलह उत्तर प्रदेश प्रवेश गरेको जनाएको छ । उत्तर प्रदेशमा सलह देखिएपछि त्यहाँको कृषि विभाग सक्रिय भएको र किसानलाई सतर्क रहन आग्रह गरेको समाचारमा बताइएको छ ।
यसअघि संयुक्त राष्ट्र खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) ले गत ‘१७ मे’ मा सूचना जारी गर्दै दक्षिण–पश्चिम इरानमा सलहका केही झुन्ड रहेको जनाएको थियो । उक्त झुन्ड पूर्वी पाकिस्तान आउने सम्भावना रहेको उल्लेख गरेको थियो । सोही झुन्ड पाकिस्तान हुँदै उत्तर प्रदेश प्रवेश गरेको हिन्दुस्तानले लेखेको छ । गत वर्ष पनि अफ्रिकी मुलुकबाट अरेबियन देश हुँदै सलह भारत आइपुगेको थियो । उक्त सलह नेपाल पनि छिरेको थियो । भारतको बिहार हुँदै रूपन्देही, बारा, पर्सा र सर्लाहीमा छिरेको सलहले नेपालका केही जिल्लामा आतंक मच्चाएको थियो । अहिले उत्तर प्रदेशमा देखिएको सलहको झुन्ड नेपाल भित्रिने सम्भावना कति छ त ? कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रीराम घिमिरे भन्छन्, ‘सलह उडेर आउने हुँदा नेपाल छिर्ने सम्भावना हुन्छ । क्षति सकेसम्म कम गराउन उच्च सतर्कता अपनाउने हो ।’
प्लान्ट क्‍वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदी भने भारतमा देखिएको सलह नेपाल भित्रिने सम्भावना कम रहेको दाबी गर्छन् । गत वर्ष ५०/६० झुन्डमा सलह थियो । एउटै झुन्डमा करोडौंको संख्यामा सलह देखिएको थियो । विगतमा इरान र पाकिस्तानबाट पनि आएर भारतमा थुप्रिएको थियो । त्यही भएर झुन्ड ठूलो भएको थियो । त्यहाँ बस्न नसक्ने भएपछि सहलको झुन्ड फैलिँदै नेपाल आइपुगेको थियो । तर अहिले राजस्थानमा दुई/चार झुन्ड मात्रै देखिएको प्रवक्ता सुवेदीको भनाइ छ । ‘सीमा क्षेत्रमा भएकाले पाकिस्तानबाट सलह रेगिस्तान आउन सक्छ । गत वर्ष जुन गतिमा सलह उत्पादन भएको थियो, यसपालि त्यति छैन,’ उनले भने, ‘भारतमा पनि भयावह भएको छैन । यहाँसम्म सायद नआउला ।’ सलह प्रायः गर्मी ठाउँमा हुन्छ । घाम लाग्दा यसले कृषि बालीमा बढी क्षति पुर्‍याउँछ । राजस्थानमा बढी मरुभूमि रहेकाले सलहले त्यहाँ ब्रिडिङ धेरै गर्छ । राजस्थानकै कारण भारतमा हरेक वर्ष सलह देखिने गरेको छ । तर पाकिस्तान, अफ्रिका र इरानको मरुभूमिमा सलह उत्पादन भएर झुन्ड भारततर्फ आए मात्रै नेपालमा आउने सम्भावना हुने केन्द्रले जनाएको छ ।
गत वर्ष पनि समयमै सावधानी अपनाउँदा असार १३ मा नेपाल छिरेको सलह तराई, पहाडदेखि हिमालसम्म करिब ५२ जिल्लामा पुगेको थियो । सलहले दाङ, प्यूठान, मकवानपुर, अर्घाखाँची र पाल्पामा बढी क्षति पुर्‍याएको थियो । ती क्षेत्रमा मकै, तरकारी, फलफूल र भटमास बाली गरी करिब ११ सय १८ हेक्टरमा क्षति पुर्‍याएको केन्द्रले जनाएको छ । विभिन्न क्षेत्रमा भएको बर्खाका कारण ठूलो क्षति भने भएन । सलह गर्मी/उज्यालोमा मात्रै सक्रिया हुने हुँदा खेतीबालीमा धेरै क्षति नभएको केन्द्रको तथ्यांक छ ।
सलह चिसो ठाउँमा बाँच्न सक्दैन । २२ डिग्रीभन्दा तलको तापक्रममा नबाँच्ने विज्ञहरू बताउँछन् । हावाको बहावसँगै हिमाली जिल्लामा पुगे पनि तापक्रम र वातावरणअनुकूल नहुँदा गत वर्ष धेरै मरेको केन्द्रका प्रवक्ता सुवेदीको भनाइ छ । ‘गत वर्ष मुस्ताङ र जुम्लामा क्विन्टलका क्विन्टल मरेको देखियो,’ उनले भने, ‘अलिकति झुन्ड चीन पनि पुग्यो ।’
सलह हावासँगै प्रतिदिन १ सय ५० किमि टाढासम्म उड्न सक्छ । सूर्यास्त हुँदा सलहले रुखबिरुवालगायतका स्थानमा आश्रय लिन्छन् । बिहान सूर्योदयपछि एक/दुई घण्टा घाम तापेर त्यसपछि सक्रिय भई आहारा (कुनै पनि हरियो वस्तु) खान्छन् । दिनमा एउटा कीराले आफ्नो औसत शरीरको तौल बराबरको करिब २ ग्राम खान्छ । औसतमा एउटा सानो सलहको झुन्ड (एक टन बराबरको) ले एक दिनमा बढीमा १० हात्ती वा २ हजार ५ सय मानिसले खाने आहारा बराबरका वनस्पति नष्ट गर्ने केन्द्रले जनाएको छ ।